CM Punk Movie Ongororo: Musikana Pane Iyo Yechitatu Pasi - Wwe
CM Punk Movie Ongororo: Musikana Pane Iyo Yechitatu Pasi
CM Punk anoita chinzvimbo chake chekutanga muMusikana Pane Iyo Yechitatu Floor saDon Koch, aimbova gweta anotamira kunharaunda yemaguta kunotanga hupenyu hutsva nemukadzi wake ane nhumbu yakanyanya.
Don anoenderera kumberi kwemukadzi wake kuti atange kugadziridza pamba pamwe chete nembwa yake Cooper, asi ari mukushamisika pazvinoonekwa kuti imba yacho haidi kuvandudzwa.
Pfungwa yedzimba dzinotambirwa dzakaitwa kurufu kana zvasvika kune epfungwa kana kunyange emashiripiti emafirimu, asi iyi inowedzera kuwedzera kwakasiyana. WWE mafeni anonyatso ziva CM Punk sezvo director akaita zvishoma kwazvo kuviga maTattoo ake apo iye achiedza kupinda muchiitiko chemurume uyo 'akadzivirira zvishoma makore gumi nemashanu mujeri'.
Iyi firimu zviri pachena kuti inotanga kunonoka uye kune chikamu chiri nani chemuvhi, CM Punk uye imbwa yake ndiyo nyeredzi hombe mufirimu neyaimbove WWE nyeredzi achishandisa FaceTime kudyidzana nemukadzi wake. Ichi chiyeuchidzo cheI Am Legend apo Will Smith nembwa yake vanoba iyo showa, asi nerombo rakanaka kune dzimwe nhengo dzinoverengeka dzinodonhedza mukati uye dzinopa imwe backstory kuna Don mukati mese.
Izvi hazvo hazvisi zvevane moyo unopera uye zvinotora chinguva kuti vaende, nepo chikonzero chaicho chezvakawanda zvezvinoitika mufirimu, usaputirwe kusvika kumagumo. Haisi yakaipa yakaipa kutanga kwaPunk, uyo akatora rumwe ruzivo mubhizimusi rekuita kubva kune rake WWE basa, asi pamwe iri bhaisikopo iro vazhinji vevateveri vake vaisazokwanisa kutarisa.
Kune zviitiko zvehunhu hwevakuru mukati mese, saka kana iwe uri kufunga nezvekutarisa izvi, isa mwana mudiki pamubhedha uye siya masitepisi akavhenekera nekuti iwe uchazoda imwe kambani ichibuda mukamuri kana zvapera.
Girl Pane Iyo Yechitatu Floor yave kuwanikwa kutenderera paNetflix uye nezvimwe zvekushambadzira zvishandiso pasirese.
Wakatarisa here Musikana paPasi Pechitatu? Unobvumirana nekudzokorora here? Goverana pfungwa dzako muchikamu chemashoko pazasi ...
chii chaunofarira sosi yekufemerwa?
runyorwa rwewe wwe ppvs 2017
paunoona kuti hauna shamwari
wwe zororo kushanya 2016 mutsara
zvinorevei kuva wakasununguka mweya